Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ
version 0.9.2 –4နှစ်နှင့်ကျွန်တော်ကိုမချိုးပါနဲ့
မတ်လ 11, 2013 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
ကျနော်တို့ကြီးပြင်း4(တကယ်တော့ 5) ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အဘို့အ tulips
ဟုတ်ကဲ့, wordpress ကိုအဘို့အ Transposh ၏ပထမဦးဆုံး version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကတည်းကလေးနှစ်အတွင်းကဖြစ်. နှင့်အမှန်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရှည်လျားလမ်းလာကြပြီ.
Transposh အားလုံးက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုကျော်၏ထောင်ပေါင်းများစွာကအသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာကိုပျော်ရွှင်အသုံးပြုသူများရှိသည် (အနည်းငယ်လျော့နည်းပျော်ရွှင်သူမြားကို🙂 ).
ဒီဗားရှင်း, 0.9.2, ငါတို့သည်ယခုအားဖြင့်ခန့်မှန်းကြသည်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး, နောက်လေးနှစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ version တစ်ခုတမျှော်မှန်းထားကြပြီ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်နှစ်ဦး) ပြီးသားပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်လိမ့်မည်. သို့သော်ဟန်, သင်ကဖို့စီစဉ်ထားအဖြစ်ဘဝမရှိသလောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါဘူး.
ဒီပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parser ကိုအသစ်အပြုအမူကိုရည်ညွှန်းသည်, ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရဖို့အသုံးပြုလာသောအခါ &nbsp; (သော non-ပါဝင်လို့အာကာသဖြစ်သင့်) ကျနော်တို့ကတကယ်တော့နှစ်ဦးသို့ထားသောစာပိုဒ်တိုများချိုးဖျက်, အမှုအရာဖြစ်သင့်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘဲအရာဖြစ်၏. ဒါကြောင့်မျှော်လင့်အခုပုံသေဖြစ်ပါသည်, နှင့်ငါတို့သည်နောက်တဖန်မချိုးပါလိမ့်မယ်!
အခြားသော plugins သို့မဟုတ်အာဘော်များကို process_page အချိန်မတိုင်မီခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါအမှုကိစ္စ override
တူညီတဲ့ဘာသာပြန်ချက်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုအပိုဒ်၌ထင်ရှားသည့်အခါ nasty bug ကို Fix
translate_on_publish မသန်စွမ်းသူတစ်ရှိရာပို့စ်အပေါ် dserber မပြုဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း bug ကို Fix
.po ဖိုင်များကို Update ကို, အားဖြင့်တူရကီဘာသာပြန်စာပေ Omer Faruk Khan က
သင်သည်ဤ version ကိုခံစားရပေလိမ့်မည်! ဒါဟာအမိန့်ဖြစ်ပါသည်! 🙂
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, မှေးနေ့, အသေးအဖွဲ, parser ကို, လွှတ်ပေး
version 0.8.2 –3နှစ်ပေါင်း, 66 ဘာသာစကားများ, 1 wordpress ကို
မတ်လ 6, 2012 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 21 comments
ငါကလည်း3ကကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ဖယောင်းတိုင်!
ဒါဟာသုံးနှစ်ကြာခဲ့ (သုံးရက်အတွင်း, သုံးဆယ်သုံးနာရီ) Transposh plugin ကိုပထမဦးဆုံး version ကို repository မှာ plugin ကို wordpress.org အပေါ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးကတည်းက.
ဒါဟာပထမဆုံးခုန်တစ်နှစ်ခဲ့ (29ဖေဖေါ်ဝါရီလကြိမ်မြောက်) နှင့် Transposh အတွက်အမှန်တကယ်ခုန်တစ်နှစ်. plugin ကိုကျော် repository မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီး 50,000 ဆယခုနှစ်အတွင်းနှင့်တစ်ဦးရဲ့ features တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုနှင့်ထောက်ခံဘာသာစကားတွေအရေအတွက်စုစုပေါင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ယနေ့အဘိဓါန် Hmong Daw ၏အပြင်အားဖြင့်ငါတို့သည်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအရေအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့ပထမဦးဆုံး plugin ကိုရှိပါတယ် 66 ဘာသာစကားများ.
ဒါကတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာခဲ့သည် (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဘဝရှိသည်) အလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ plugins အတစ်နှစ်, Google ကသူတို့ရဲ့နီးပါး API ကိုထောက်ခံမှုကျဆင်းသွားသည့် (တစ်ဦးလစာမော်ဒယ်ကိုပြောင်းမှသာ) Bing မှအသစ်န့်အသတ်ချမှတ်ထားနေစဉ်. Transposh ထိုအပြောင်းအလဲများအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည်, အခြားသော plugins ရှင်သန်ရပ်တည်ဘဲနေစဉ်.
အဘယ်အရာကိုအနာဂတ် Transposh မြားအတှကျပါဘူး? ကျနော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အသစ်အချို့အရာတွေပွက်ပွက်ဆူနေသောနေကြတယ်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ဘာသာပြန်ချက်တိုးတက်ရန်ကျွန်တော်တို့၏ရူပါရုံကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ, အမှုအရာအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ – သူတို့အထဲကဖြစ်လိမ့်မည်. ဤအတောအတွင်း, သင့်ရဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်, နှင့်အတူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုးရှင်းတဲ့အီးမေးလ် “သင့်ရဲ့ plugin ကိုကြီးလှပေ၏” ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွားဖို့မောင်း. သင်သည်ယုံကြည်လျှင်ထိုသို့ငါတို့သည်ကောင်းစွာလုပ်နေ, ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်လိုင်း drop, ငါတို့သည်အရာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သင့်တယ်ထင်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်စုတစ်ခု drop, နှင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုစို့သည်ဟုထင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤအချက်သည်ဤသတင်းစကားကိုတက်ဖတ်ပြီးပါပြီဘာကြောင့်နားလည်ရန်ပျက်ကွက်😉
အလွန်ကြီးစွာသော 4th တစ်နှစ်မိမိကိုယ်ကိုဆန္ဒပြုရင်း, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပိုကြီးကိတ်မုန့်နှင့်အတူအဆုံးသတ်မည်🙂
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, မှေးနေ့, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin